Mgbe a na - enwe ụgbọ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́, Wooven zutere ndị na - eme ihe n’ụlọ ọrụ na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ebe ebe usoroiheomume>Mgbidi Ọchịchị
Mgbidi Ụzọ n’Ebe ỌchịchịA na - aghọkwu n’ụlọ ndị a na - ewu n’oge a, ọ ghọwokwa ụzọ ọhụrụ maka ịkpọ ọkụ n’afọ ndị na - adịbeghị anya. N’ihi ya, gịnị bụ mgbidi a na - achị n’ahụ́ n’ahụ́? Mgbidi a na - achị n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ ma ọ bụ na ndị mmadụ na - eji akụkụ akụ́kụ ahịhịa n’ụlọ ukwu. Mgbidi na - achị ụgbọ agbọcha na - enye ndị ọkachamara ewu na owuwu owuwu na owuwu owuwu na owuwu. Ndị na - arụ ọrụ pụrụ ime ihe ọhụrụ dịgasị iche iche n’ime ihe owuwu ụlọ site n’enyemaka nke a na - enwe ụgbọ ígwè na - enweghị ntị.
Ụzọ mgbidi a na - anwụ
Mgbidi ahịhịa n’ahụ́ n’ahụ́ n’akwụkwọ n’ahụ́ pụrụ inye ọtụtụ uru ndị dị n’okpuru:
L Ihe ndị a na - eme n’àgwa- E ji akụkụ nke dị elu 316 na - enweghị ntị, ọ̀tụ̀tụ̀ ahịhịa anyị dị ike, mara mma ma dị mfe. Ha bụ 100% a pụrụ ịrụgharị, na - eguzogide nnọọ n’ime mmiri, a na - achọkwa obere ma ọ bụkwanụ a na - enweghị nchekwa. Nke ka nke kasị, ọ na - egosipụta ogologo ndụ karịa ihe ndị yiri nke ahụ n’ahịa.
L Ụzọ a na - adịgide- Ihe siri ike na - apụta ikike dị elu na iguzogide megide ifufe na snow. Ọ na - enweta ọdịdị 3-D maka inye ihe dị ịtụnanya nke ime mgbanwe. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na - arụ ọrụ zuru ezu ọbụna n’ihu ihu ọkụ na - ekpo ọkụ n’ihi na kabel na - adịghị anabatara okpomọkụ.
L Uru ndị dị n’ebe gburugburu gburugburu nke ịchị- A chọrọ ịkwado ka ukwuu vine dị ike, bụ́ nke na - emepụta oxygen iji belata mmetụta ụba.
L Ụwa n’ahụ́ na ihu- Ọ na - eduzi ọkụkụ nke ụlọ gị site n’elu mgbidi, ebelata ume ị na - eri n’ụlọ gị nakwa na - ebelata ụzụ n’ụzọ dị irè.
L Abamuru ndị na - enwe mmekọrịta ọha na ụbọ- Ahụ ahịa ahịa ahịa ahịa n’ahụ́ n’ahụ́ na - enwe anya ndị mmadụ ma mee ka ha nwee obi ụtọ karị.
L Usoroiheomume nke mpagharaoba-E nwere ike itinye ahịa n'ahụ́ n'ahụ́ ma ọ bụ ebe ọ bụla, dị ka ọ̀tụ̀tụ̀, Ụzọ egwuregwu na ụgbọala n’ụlọ ọrụ.
L Ka ịnwale- Ebe ọ̀tụ̀tụ̀ a na - adịghị egwú a na - achọkarị ihe a na - eme ka a bịa n’ịnyụnye.
L Owu ka egwu ohere:- Usu a na - enwe ohere dị mfe ịchịkwa ihe ọkụkụ na ịchịkwa. Tụkwasị na nke ahụ, a pụrụ iwepụ ahịa ahịa n’ụzọ dị iche iche maka nchekwa ụlọ dị mfe iji kwekọrọ mgbanwe n’oge.
Mgbidi ụbọ ọbụl na-agbe aṅụ
Mgbidi ọla ụbụ ụbụrụ n’ahụ́ n’ahụ́
L Ihe n’ádụ:Ezi ezigbo akụkụ 304, 316, 304L na 316L.
L Ụdị ụbụrụ:1.2 mm ruo 3.2 mm, na ụgbọ mm ndị ọzọ na - enwekwa.
L Ụgbọala:7 × 7 na 7 × 19 bụ ndị bụ́ isi e ji eme ihe, ma a na - enyekwa 1 × 7 na 1 × 19.
L Ụhara mmebi emepen: 25 mm × 25 mm ma ọ bụ 76 mm mm × 76 mm mm, na a na - enye ụhara ndị ọzọ dabeere n'ihe ndị a na - achọ.
L Ụdị Mesh:Ụbọchị a na - enweghị ntị ma ọ bụ n’ahụ́ ụgbọ a na - enweghị ntị.
Ụbọchị ụgbọ mmiri a na - egbochi n’ahụ́
Ọzọrụ:Ịgba Ụlọ Ọkụ
Mwagụ̀ stainless steel rope mesh green wall, rope mesh, green facade,
Mgbidi Ụbọchị Ọchịcha Na - echebe Iwu Ụlọ N’ụzọ Irè
Mgbidi Ụbọchị Ọchịcha Na - echebe Iwu Ụlọ N’ụzọ IrèMgbidi Ụzọ n’Ebe ỌchịchịA na - aghọkwu n’ụlọ ndị a na - ewu n’oge a, ọ ghọwokwa ụzọ ọhụrụ maka ịkpọ ọkụ n’afọ ndị na - adịbeghị anya. N’ihi ya, gịnị ...
Akụkụ n’ebe a na - acha ahụ́?
Akụkụ nkeỤzọ?AvocadoA na - ejikarị Avocado mee salad, bụ́ nke ndị mba ọzọ na - emekarị ihe. Ọzọkwa, ọ na - enwe otu ihe ahụ, ọ bụkwa otu n’ime mkpụrụ ndị ọtụtụ ndị enyi na - eme ka ha chebe. Avocado n...
Ihe Ndị Na - enyere Ndụ Ụzọ
Ahụ ahịhịaPụrụ site na system dị mgbagwoju anya maka ụlọ dị iche iche, na ihe ọkụkụ na - eto eto n'elu dị iche iche, na usoro ndị dị mfe bụ́ ebe a na - eto site n’ala, na - enye ohere ntụrụndụ nke ọch...